Ghostwriter Geosciences I Waxaan qoreynaa shahaadadaada BA ama MA Papernerds
, 19: 50
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah cilmiga cilmiga dhirta
Barashada cilmiga dhulka ayaa ku saabsan qaabdhismeedka iyo wixii ka sarreeya abuuritaanka dhulka. Geoscience sidaas darteed waa maaddo saynis ah oo ay saddex cilmiyadeed oo waaweyn cilmiga geology, geophysics iyo macdanta lasoo koobo. Dheeraad ah Qeyb-hoosaadyada cilmiga geology-ga ayaa ah z. B. Paleontology, geology, hydrogeology, geochemistry, geology-dhismeedka, geoecology iyo geoinformatics. Mid ka mid ah faa'iidooyinka koorsadan ayaa lagu arki karaa xaqiiqda ah inaysan jirin xaddidaad gelitaan oo loo maro lambarka 'clausus'. Koorsada lafteedu waxay u qaybsan tahay shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo heerka labaad. Afarta xilli-dugsiyeed ee ugu horreeya, aasaaska aragtida guud ee cilmiga dhirta iyo maadooyinka yar-yar ayaa inta badan la baraa Mathematikum, fiisikiska iyo chemistry, kadib simistarka afaraad, qotodheerida ficil ahaanta wixii horay loo bartay waxay qaadataa qaab dalxiisyo. Dalxiisyadu waxay qaadanayaan dherer kala duwan; laba illaa saddex toddobaad maahan wax aan caadi ahayn.
Waa in maadooyinka oo dhan Shaqada guriga iyo Waraaqaha siminaarka in la abuuro. Shahaadadu waxay keenaysaa a shahaadada bachelor oder shahaadada Masterka. Waxaas oo dhami waxay ka dhigan yihiin culeys fara badan iyo waqti yar oo mowduucyada kale ee waxbarashadaada ah. Maaddaama aan nahay shirkad qormooyinka wax ku qorta, waxaan kaa caawinaynaa inaad yareyso culeyskan Waxaan kugu taageeri karnaa shaqada cilmiga. Kaliya nala qaado Kontakt tusaale ahaan emayl. Fadlan weydiiso mid bilaash ah dib u xusuusasho waqti adiga kugu habboon. Markiiba waanu kula soo xidhiidhi doonaa oo waanu qaban doonaa hawlahaaga. Shaqada tacliimeed waa inaad u isticmaashaa wakaaladdayada 'ghostwriter'. Sidoo kale waa lagusoo dhaweynayaa inaad shaqadaada si toos ah u dalbato si aan isla markiiba u bilowno qorista shaqadaada. Waxaa laguu xilsaari doonaa maamule shaqsi ah oo kula socon doona shaqadaada isla markaana kuu noqon doona xiriir toos ah. Waan caawin karnaa ardayda.
Qorayaasheennu waxay si dhakhso leh u aqoonsadaan cilaaqaadka sidaas darteedna waxay keenaan tayo wanaagsan. Waxaan kaa caawin karnaa aqoontayada dhaqaale. At Fragen gacantaada ayaan ku jirnaa. Mawduucaagu waa xooggeenna. Inaad qorto qoraalkaaga ayaa kaa caawin doona Qorayaashayada ayaa mas'uul ka ah tayada. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Adeegsiga adeegyadeena ayaa kaa caawin doona waxbarashadaada. The Shaqada guriga waa inaad naga dhiibtaa. Xitaa adiga leh Warqad aqoon kororsi ah waan ku taageersanahay. Aqoonyahan cirfiid aqoonyahan ah ayaa shaqada kuu qaban doona. Si loo soo gudbiyo shaqada sayniska, shaqo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa. Tani waxay ku siin doontaa darajo wanaagsan. Hubinta khayaanada ayaa dabcan sidoo kale daboolay adeeggayaga! Ugu dambeyntiina, markaad noo shaqaaleyso qoraa ahaan, waxaad ka faa'iideysanaysaa wax kasta oo ka wanaagsan kuwa caddaaladda ah Qiimaha iyo tayada wanaagsan! Si aad ugu guuleysato koorsada, dhammaan qaybaha waa in dabcan la gudbiyaa. Tani aad ayey ugu adagtahay qaybo ka mid ah maadama maadooyinkan la baaray. Ku gudubka maadada noocaas ah ayaa ah tan ugu fiican ee kugu dhici karta. Laakiin waxaad u baahan tahay waqti kugu filan iyo dukumiintiyada lagama maarmaanka ah iyo mashquul la'aan Shaqada guriga, Waraaqaha siminaarka, der shahaadada bachelor ama shahaadada Masterka.
Qoraalka cirfiidka cilmiga dhulka
Qoraalka ghost ee maadooyinka ay ku jiraan Shaqada guriga In la abuuro waxay ka mid yihiin maaddooyinka adag. Waa inaad caawimaad ka raadsataa maadooyinkan yar yar si celceliska dhibcahaagu uusan u dhicin. Ka hel caawimaaddan qoraaga cirfiidka oo khibrad sannado ah u leh aaggan. Kaliya noo soo dir mid bilaash ah hadda dib u xusuusasho mid. Waxaan kula soo xiriiri doonaa waqti adiga kugu habboon si aan si dhakhso leh u bilaabi karno shaqadaada oo aan ku nafisno.
Barashada cilmiga dhulka
Waxaan ka caawin karnaa ardayda barnaamijkooda shahaadada. Waxaan ku taageereynaa aqoonyahanadooda shahaadada Masterka iyo Maqalka. Aqoonyahannada waxay qaadanayaan caawimaadda ku saabsan guulahan adag ee daraasadda ah si ay xoogga u saaraan imtixaannada muhiimka ah. Cilmiga cilmiga dhulka (Geology) waa maaddo aad u adag in la barto. Qoraalku markaa annaga ayaa nala wareegi karna.
Cilmiga cilmiga nolosha
Rajada xirfadeed ee ardayda ka qalinjabisay daraasadaha cilmiga dhulka ee shahaadada mastarka ayaa lagu qiimeeyay inay aad u wanaagsan yihiin. Adigu waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad sii wadato xirfaddaada tacliimeed oo aad sameyso dhakhtar. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale ka shaqeyn kartaa waaxda gaarka loo leeyahay shirkad qaran ama caalami ah. Warshadaha batroolka iyo alaabta ceeriin waa in halkan lagu xusaa magac ahaan. Maamulada iyo machadyada kale waxay kaloo ubaahanyihiin ardayda kaqalinjabisay cilmiga geosiska. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ka digtoonaataa hal faahfaahin oo ku saabsan shaqadaada mustaqbalka: goobtaada shaqadu waxay noqon doontaa kombuyuutar halkii laga dhigi lahaa kuwa waaweyn ee bannaanka. Barashada cilmiga cilmiga dhirta ayaa xadidaya waqtigaaga qiimaha badan si ka badan inta aad moodeyso. Farxadda ardayda, qoyska iyo / ama hiwaayad ahaan suurtagal ma aha in mar dambe la helo.
Aagga cilmiga dhirta ee shirkadaha ganacsiga
Haddii aad si guul leh u dhammaysato shahaadada cilmiga dhulka, waxaad haysataa fursado badan oo aad ku bilaabi karto noloshaada xirfadeed. Waxaad sidoo kale raadin kartaa xirfadaada saynis. Tusaale ahaan, waxaad ka shaqeyn kartaa hay'adaha cilmi baarista oo aad u qoto-dheerayn kartaa shaqadaada maaddo adiga kugu habboon. Waxa kale oo aad geli kartaa ganacsi oo aad xirfadahaaga ku tijaabin kartaa nolosha xirfadeed. Waxyaabaha kale, sharaxaadda shaqo ee cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga dhulka ama shaqada hay'ad dawladeed oo federaal ah ayaa khuseysa
Hubinta tayada ee cilmiga cilmiga dhirta